क्यान्सर उपचारमा नर्भिकको फोकस, नेपालकै ठूलो ट्यूमर बोर्ड गठन - Artha Path Artha Path
काठमाडौं । विभिन्न खालका क्यान्सरको सबैखाले उपचार विधि र पद्धति विकासमा लागिपरेको नर्भिक इन्टरनेशनल हस्पिटलमा संभवत नेपालकै ठूलो ट्यूमर बोर्ड गठन भएको छ ।
क्यान्सरका बिरामीलाई संभावित उत्तम उपचार विधिमा समावेश गर्ने हेतूले गठित ट्यूमर बोर्डमा हाल २३ जना विशेषज्ञ चिकित्सकहरुको सहभागिता रहेको छ । बोर्डको आकार बढाउँदै लगिने अस्पतालले जनाएको छ। यस्तो अभ्यास यूरोप÷अमेरिकाका स्तरीय अस्पतालहरुमा समेत हुने गर्छ ।
नर्भिक अस्पतालका वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डा. राजीव झाका अनुसार बोर्डमा सहभागी विशेषज्ञहरुले कुनै बिरामीको सही उपचार योजनाको विषयमा साप्ताहिक रुपमा छलफल गर्ने गर्दछन् । कुनै एक विशेषज्ञले हेरिरहेको केसलाई सामूहिक रुपमा हेर्ने गरिन्छ र उपचार विधिलाई अझ गुणस्तरीय बनाउने कोशिश गरिन्छ । बोर्डमा कुनै बिरामी, उसको समस्या, भइरहेको उपचार विधि, उसका विभिन्न मेडिकल रिपोर्टहरुको विषयमा समेत छलफल हुने डा. झा बताउँछन् ।
‘विश्वमा हरेक दिन ट्यूमर तथा क्यान्सरको उपचारको विषयमा रिसर्चहरु भइरहेका हुन्छन् । विभिन्न इन्भेष्टिगेसनबाट फरक फरक रिजल्टहरु पनि आइरहेका हुन्छन् ।’ डा. झाले भने–‘उपचारका विधिहरु पनि नयाँ नयाँ आइरहेका हुन्छन् । अन्य देशमा अभ्यासमा ल्याइने आधुनिक विधिहरुलाई कसरी भित्र्याउने, वा त्यस्तै ढंगले कसरी यहाँ उपचार गर्न सकिन्छ भन्ने जस्ता विषय पनि बोर्डमा छलफल हुन्छ ।’
क्यान्सरको उपचारमा विशेष गरी मेडिकल अन्कोलोजिष्ट(औषधिको मद्धतबाट क्यान्सरका बिरामीको उपचार गर्ने व्यक्ति), सर्जिकल अन्कोलोजिष्ट(सर्जरीबाट क्यान्सरको उपचार गर्ने चिकित्सक) र रेडिएसन अन्कोलोजिस्ट(रेडिएसनको मद्धतले क्यान्सरको उपचार गर्ने चिकित्सक) को मुख्य भूमिका हुन्छ । बोर्डमा पनि यस्ता विज्ञको सहभागिता गराउने चलन छ ।